सुन तस्करीको अाराेपमा एनआरएन संयोजक नै कतारबाट पक्राउ !::Hamrodamak.com
सुन तस्करीको अाराेपमा एनआरएन संयोजक नै कतारबाट पक्राउ !
सुन तस्करी गरेको अाराेपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का मध्यपूर्व संयोजक राजेन्द्रकुमार शर्मा कतारबाट पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौं। सुन तस्करी गरेको अाराेपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का मध्यपूर्व संयोजक राजेन्द्रकुमार शर्मा कतारबाट पक्राउ परेका छन्। कतार प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
पेगोन इन्जिनियरिङ कम्पनीको सञ्चालकसमेत रहेका शर्मालाई कार्यालयबाट घर फर्किंदै गर्दा पक्राउ गरेको दूतावासले जनाएको छ। शर्मामाथि कतार प्रहरीले तस्करीको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता भुषण घिमिरेले भने शर्मामाथि लागेको आरोपको पुष्टि भइनसकेको र उनि कतारमा भएको सांगितिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको नाटकका कारण पनि शर्मा पक्राउ परेको हुनसक्ने आशंका गरिएको उनले बताए।